Timor Atsinanana: Manangana Firenena Iray Avy Amina Fiteny Maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2011 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Ελληνικά, русский, srpski, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, Magyar, Esperanto , English
Ity dia anisan'ny lahatsoratra manokana ataoany mikasika ny Fiteny sy ny Aterineto.
Samy nofidiana ho fiteny ofisialy avokoa na ny Tetum na ny fiteny Portigezy ho an'i Timor Atsinanana izay firenena vao teraka raha nahazo ny fahaleovantenany izy tamin'ny taona 2002. Na izany aza, maherin'ny 16 ny isan'ny fiteny nasionaly, ary roambinifolo mahery ny isan'ireo tenim-paritra hafa ampiasain'ireo mponina Timorezy amin'ny andavanandro.
Raha ny fomba fanao, ny Tetum, ny teny fampiasan'i Timor Atsinanana, no tena be mpampiasa manerana ny fanjakana. Etsy andanin'izany kosa, “tsy ny Portigezy akory no teny fampiasa iraisana fa kosa izy no fiteny famantarana “, hoy i Mari Alkatiri, mpitarika ny Fretilin (antoko mpanohitra), tanàty lahatsoratra iray [pt] tamin'ny 2007 avy amin'ilay mpanao gazety Portigey Paulo Moura, izay navoaka indray toa amin'ny bilaogy Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Milaza ny tatitry ny Banky Mondialy 2011 mikasika ny fandrosoan'ny firenena nandritra ny folo taona lasa farany fa “ny 5 isan-jaton'ny olona ihany no miteny Portigey” ary hoy izy manampy “nanomboka tamin'ny 2009, maherin'ny 70 isan-jaton'ny mpianatra izay nadinina tamin'ny faran'ny diplaoma voalohany no tsy afaka namaky akory na dia teny tsotra amina teny Portigey aza. Ity no zava-bita mahamenatra indrindra taorian'izay 10 taona niezahana izay(…). Vondron'olona marobe amin'ny vahoaka no mety miasa nefa mety ho tsy mahay mamaky teny sy manoratra akory.”
Raha ny antanan-tohatra nomena, dia ny Adabe (avy amin'ny nosy Atauro), Habu (avy amin'ny distrika Manatuto ), ary ny Kairiu-Midiki sy ny Naueti (avy amin'ny disitrikan'i Viqueque), no heverina fa tena marefo, satria “ankizy maro eo amin'ny faritra no mampiasa ireo teny ireo, nefa ao anatina sehatra voafetra ihany”, toy ny hoe any an-trano sy eo amin'ny fiainana mahazatra.
Miakatra zanatohatra iray ny Waima'a, izay heverina ho tena tandindonin-doza fatratra – “tsy mianatra ity fiteny ity intsony ny ankizy amin'ny maha-tenindreny azy any an-trano”. Any amin'ny tendro avaratra atsinanan'ny nosy, ny fiteny Maku'a , izay raha ny fahitan'ny Atlas azy dia olona 50 sisa no nampiasa ilay teny tamin'ny 1981, dia tena tandindomin-doza be ihany koa ary mety ho levona tanteraka mihitsy aza. Bokikely iray monja mba nivoaka tamin'ity fomba fiteny ity.
Na izany aza, nisy ihany sasany tamin'ireo fitenin'i Timor Atsinanana no nahita ny lalany ao amin'ny haino aman-jery vaovao sy ny seha-pifaneraserana amin'ny aterineto, izay mety mbola hanohana tsara ny fitohizany.
Hita amin'izany tranga izany izao ohatra ny Fataluku, fiteny Papuan ampiasain'ny olona miisa 35.000 any amn'ny ankamaroan'ny distrika any amin'ny faritra atsinanan'i Timor, izay misy antontan-kevitra tsara eo amin'ny tranonkalan'ny Tetikasan'ny fiteny Fataluku sy ny Firaisa-monina Fataluku. Ampiasain'ireo vondrona tanora mpanakanto avy any amin'ny faritr'i Lospalos ihany koa izy ity amin'ny mozikany sy ny fisehoana an-tsehatra ataony:
Nanandratra ny fiteny Timorezy maro ny tetikasam-pikarohana antontan-kevitra momba ny teny nataon'ny anjerimanontolon'i Hawai, niaraka tamin'ny fanampian'ny fifanakalozana mpianatra toy ny tenim-paritra Osoroa sy ny Fatumaka an'i Makasae – “fiteny maro an'isa any amin'ny faritra atsinanana any Timor-Leste” – toy izany koa ny Waima'a, Fataluku, Mambae sy ny Tokodede. Ity farany moa izay ampiasain'i João Paulo Esperança, Portigey mpikaroka momba ny teny sady mpandika teny, matetika eo amin'ny bilaoginy Hanoin Oin-oin (Fisaina samihafa) [tet].
Mpitoraka bilaogy iray amina fiteny tsy dia fandre i Abe Barreto Soares, izay nitafatafa mivantana ho an'ny Global Voices tamin'ny 2009, ary ankoatry ny fanoratana amin'ny teny Anglisy,Tetum, sy Bahasa Indonezia, dia manana ihany koa izy bilaogy tononkalo amin'ny Galole laguage avy any amin'ny distrikan'i Manatuto antsoina hoe Limusan.
Lavidavitra kely any Atsimo, asongadina ao amin'ny bilaogin'i Ildefonso Pereira ihany koa ny fiteny Idaté. Nampiasaina ifandraisana amin'ny fiteny Timorezy ihany koa ny Facebook, ohatra izao ity vondrona ity amin'ny fiteny Naueti.
Mampiantrano fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto antsoina hoe “Fampiasàna ireo Fitaovan'ny Mediam-Bahoaka Mba Hanandràtana Ireo Teny Zara Raha Misy Mpiteny ” miaraka amin'ny New Tactics sy ny Indigenous Tweets ny Rising Voices – tetikasa tohanan'ny Global Voices . Raisina an-tanan-droa avokoa ireo mpampiasa ny teny rehetra any Timor Leste ka miriaria aty amin'ny tontolon'ny haino aman-jerim-bahoaka mba hanandratra ny fifandraisana amin'ny aterineto amin'ny fampiasana ireo teny tsy dia fampiasa mba hifampizara ny tetikadiny, ny zava-bitany ary ny zava-tsarotra iainany eo amin'ny sehatra fifanakalozan-dresaka anaty aterineto.